Ukuthengisa nge-imeyile ezona ndlela ziBalaseleyo: Yintoni ukufudumala kwe-IP? | Martech Zone
Ukuba inkampani yakho ithumela amakhulu amawaka e-imeyile ngokuhanjiswa, ungagijimela kwimicimbi ethile ebalulekileyo kunye nabanikezeli beenkonzo ze-intanethi abahambisa zonke ii-imeyile zakho kwifolda ye-junk. Ii-ESP zihlala ziqinisekisa ukuba bathumela i-imeyile kwaye bahlala bethetha malunga nokuphakama kwabo amaxabiso okuhambisa, kodwa oko kubandakanya ukuhambisa imeyile kwi junk ifolda. Ukuze ubone i Ukuhanjiswa kwibhokisi engenayoKuya kufuneka usebenzise iqonga lomntu wesithathu njengamaqabane ethu 250ok.
Yonke iseva ethumela i-imeyile inedilesi ye-IP ehambelana nayo, kwaye ii-ISP zigcina imikhombandlela yezi dilesi ze-IP kunye nokuba zingaphi izikhalazo kunye nezikhalazo zogaxekile abazifumana kubasebenzisi babo kwi-imeyile ethunyelwe ivela kwiidilesi ze-IP. Akuqhelekanga kwezinye ii-ISP ukuba zifumane izikhalazo ezimbalwa kwaye ngokukhawuleza zihambe zonke ii-imeyile kwifolda ye-junk endaweni yebhokisi engenayo.
Ukufudukela kuMboneleli weNkonzo omtsha we-imeyile
Ngelixa uluhlu lwakho lwababhalisile lunokuba yi-100% yababhalisi be-imeyile abasemthethweni abangene, okanye bakhethe ukungena kabini, kwii-imeyile zakho zentengiso… ukufudukela kumnikezeli ngenkonzo omtsha we-imeyile kunye nokuthumela kuluhlu lwakho lonke kunokupela intshabalalo. Izikhalazo ezimbalwa zinokwenza ukuba idilesi yakho ye-IP ikhawuleze kwaye akukho mntu uya kufumana i-imeyile kwibhokisi engenayo.
Njengomsebenzi olungileyo, xa abathumeli abakhulu befudukela kumnikezeli ngenkonzo ye-imeyile, kuyacetyiswa ukuba idilesi ye-IP ibe yiyo kushushu. Oko kukuthi, ugcina umboneleli wakho we-imeyile okhoyo ngelixa usandisa inani lemiyalezo oyithumelayo ngenkonzo entsha… de ube uzenzela igama ngale dilesi ye-IP intsha. Ixesha elingaphezulu, unokufuduka yonke imiyalezo yakho kodwa awusoze ufune ukuyenza ngexesha elinye.
Ukuthengisa nge-imeyile: Yintoni ukufudumala kwe-IP?
Njengokufudumala kubandakanya ukunyuka okuthe ngcembe kokuqina kokusebenza komzimba ukufudumeza izihlunu kunye nokunciphisa umngcipheko wokulimala, ukufudumala kwe-IP yinkqubo yokongezwa kwenkqubo yevolumu yomkhankaso veki nganye kwidilesi entsha ye-IP. Ukwenza njalo kuya kunceda ekusekeni igama elihle lokuthumela kunye nabaNikezeli beenkonzo ze-Intanethi (ISPs).
Ukufudumeza i-IP ye-Smart: Umda wokuqala wokuhanjiswa kwe-imeyile
Le infographic evela kwi-Uplers ichaza kwaye ibonisa ezona ndlela zilungileyo ukufudumeza idilesi yakho ye-IP nomboneleli wakho omtsha we-imeyile, ekuhamba ngamanyathelo ama-5 aphambili:
Qinisekisa ukuba ulandela yonke i-imeyile yokuhambisa ezona ndlela zibalaseleyo ngaphambi kokuthumela uninzi lwee-imeyile ngokufudumala kwe-IP.
I-IP yakho ezinikeleyo kufuneka ibe nerekhodi yesikhombisi esetiweyo kwi-DNS yakho yokubuyela umva (Inkqubo yeNdawo yeGama)
Icandelo lababhalisi be-imeyile ngokusekwe kuthethathethwano kunye nee-imeyile zakho zangaphambili.
Isitshixo ekuphumeleleni ukufudumala kwe-IP ngokuthe chu kukunyusa inani lee-imeyile ozithumelayo.
Yenza ucoceko emva kokuthumela.
Bakwachaza okwahlukileyo kubaboneleli ngeenkonzo ezithile ze-Intanethi (ISPS):
I-Yahoo, i-AOL, kunye ne-Gmail zivelisa imiba ethile yokuqhekeza ngokwahlulahlula ii-imeyile kwii-bulks ezingafaniyo, oko ke kulibazisa ukuhanjiswa kwe-imeyile. Iya kusonjululwa xa sele uthumele ii-imeyile ngeemetric ezilungileyo.
Ukulibaziseka kuqhelekile kwi-AOL, Microsoft kunye neComcast. Oku kulibaziseka okanye ama-bounces angama-421 aya kuphinda azame iiyure ezingama-72. Ukuba ayinakuhanjiswa emva kwelo xesha, baya kugxuma njenge-5XX kwaye irekhodi lokuhlawula liya kugcinwa njengempazamo engama-421. Nje ukuba igama lakho likhule, akusayi kubakho kulibaziseka.
tags: AOLcomcastUmboneleli wesevisi ye-imeyileinboxumboneleli ngenkonzo ye-intanethiip ukufudumalaispiofisiyahoo